Fiadiana ny amboaran'i Frantsa Nanoratra tantara ry Bapasy, Mamy Gervais, Dabo
Vitan'ny JSSP Klioba Réunionnais ny nanoratra ny tantara tsy nisy tao anatin'ny 55 taona. Sambany teo amin'ny tantaran'ny baolina kitra mantsy no nisy klioba avy ao amin'ity
Nosy ao anatin'ny departemanta Frantsay ity tafiakatra tamin'ny dingana 1/16n-dalana amin'ny fiadiana ny amboaran'i Frantsa. Lavon-dry Bapasy, Mamy Gervais, Dabo izay mpilalao Malagasy isan'ny andrin'ny JSSP mantsy ny Klioban'i Niort Ligue 2 Frantsay ny faran'ny herinandro teo. Ny JSSP no nanafika tany Frantsa ary nahavita nandresy 2-1 tany an-tanin'olona. Isan'ny namiratra nahazoana ny fandresena i Bapasy, izay nanome ny tolotra tsara, ary nisy fotoana saika nahafaty baolina mihitsy. Teo ihany koa i Dabo mpiandry tsato-by izay nanavotra baolina maro tsy hiditra tao anaty harato. Niady mafy tao anatin'ny fiarovan-tena ry Mamy Gérvais, ka tao anatin'izany no tafidiny tsy nahy tany anaty haraton'izy ireo ny baolina, ka nahatonga ny isa ho 1-1, saingy mbola afaka nampiditra iray izy ireo . Isan'ny tafita hiatrika io dingana 1/16n-dalana io ihany koa ny Paris FC ilalaovan'i Bolida.